Thenga i-Melengestrol i-acetate powder (2919-66-6) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / Melengestrol acetate powder
SKU: 2919-66-6. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba leMelengestrol i-acetate powder (i-2919-66-6), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Melengestrol acetate powder (INN, BAN) yi-steroidal progesin kunye ne-antinoplastic agent engazange idayiswe. maxa wambi uphicilelwe njengeMGA. Akuvunyelwanga ukusetyenziswa kubantu, kwaye kunoko isetyenziswe njengesongezo sokondla ukukhuthaza ukukhula kwenkomo. kwaye kunoko isetyenziselwa njengendlela yokukhulelwa kwezilwanyana ezithunjiweyo kwii-zoos nakwezinye izikhuselo, ..
Melengestrol acetate powder ividiyo
Melengestrol acetate powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Melengestrol acetate powder
I-molecular Formula: C25H32O4
Isisindo somzimba: 396.52
Iintetho: -20-dione,17-(acetyloxy)-6-methyl-16-methylene-pregna-6-diene-3 ;6-dehydro-16-methylene-6-methyl-17-acetoxyprogesterone ;6-diene-3,20-dione,17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-pregna-acetate ;bdh1921 ;mga100 ;mga100(steroid) ;4,6-PREGNADIEN-6-METHYL-16-METHYLENE-17-OL-3,20-DIONE ACETATE;17ALPHA-ACETOXY-6-METHYL-16-METHYLENE-4,6-PREGNADIENE-3,20-DIONE
Melt Point: 202-204 ° C (i-lit.).
Alpha I-D23 -127 ° (c = 0.31 kwi-chloroform)
Isitampu Sokugcina: 0-6 ° C
umbala: Uphuzi ophuzi ophuzi
Iinkcukacha ezingaphezulu Kwi-Melengestrol i-acetate powder ofuna ukwazi
I-Melengestrol i-acetate powder, i-Heifermax, i-MGA
Yintoni ekusetyenziswa ngayo iMelengestrol acetate powder
I-Melengestrol i-acetate powder (i-MGA) i-progesational steroid esebenzayo ngomlomo isetyenziswe ekuphuculeni izinga lokukhula kunye nokuguqulwa kokutya ngokufanelekileyo nokukhupha i-oestrus kwizilwanyana zeenkomo. I-MGA yiyo kuphela isilingo sohlobo lwayo olulawulwayo kwondlo lwezilwanyana, Uluhlu lweeDoses ezivunyiweyo yi-0.25 ku-0.50 mg / isithole / imini. I-Melengestrol i-acetate powder iyondliwa ngexesha lokunyusa / ukugqiba ixesha, ngokuqhelekileyo i-90 kwiintsuku ze-150. Ukuhoxiswa kwe-2 iintsuku ngaphambi kokuba kuhlatshelwe ukubulawa kwezilwanyana ezilawulwa yi-MGA.
I-Melengestrol i-acetate powder iye yavandlakanywa ngaphambili kwintlanganiso ye-54th yeKomiti, kwaye imida yokuhlala emininzi yexeshana (MRLs) ikhuthazwa. La ma-MRL okwethutyana ayengama-5 μg / kg ngamafutha e-bovine kunye ne-2 μg / kg yesibindi sesibindi.Ngokufikelela kwisigqibo salo kuma-MRL, iKomiti ithathe ingqalelo ngala mazwi alandelayo:
- I-ADI ye-0-0.03 μg / kg yesisindo somzimba yasungulwa, elingana ne-ADI enkulu ye-1.8 μg
- Ioli kunye nesibindi kuphela ziqulethe imilinganiselo yendawo yokumakisha emakishi engqinelanayo ngokuqhelekileyo; iindlela
kunye nemida ye-quantification ephezulu kune-0.3 μg / kg ayinakwenzeka ukuba avumele ukulandelwa kwezinto eziseleyo kwiimisipha
izilwanyana eziphathwayo kunye nezilwanyana ezicetyiswayo zeMelengestrol acetate powder.
- Abaxhasi abazange bangenise indlela yokuhlalutya ifanelekileyo yokujonga iliso.
Ngenxa yoko, iKomiti incomele i-MRL yesikhashana kwaye yacela le ngcaciso elandelayo:
- Indlela yokuhlalutya ifanelekile yokwenza iifomate ze-Melengestrol i-acetate powder kwi-tissus and fat tissue.
Ngokuphendula kwisicelo seKomidi, umxhasi wanikezela indlela yokusetyenziswa kweekhemikhali eqinisekisiwe yi-58th
Ngaba i-Melengestrol i-acetate powder esebenzayo
Impembelelo yomlomo we-menningenyl acetate (MGA) kumsebenzi we-ovane uye wafundiswa kwi-264 yobisi kunye nezilwanyana zeenkomo. I-98 iifowuni zifumene i-0.4 mg MGA imihla ngemihla ixesha elifutshane (i-18 kwii-32 iintsuku), kwaye umsebenzi we-ovary wawunqunywe yi-palpation. Njengoko iziganeko ze-corpus luteum ezibonakalayo zinciphile ukusuka kwi-76% ukuya kwi-10%, iziganeko zepolisi ebonakalayo zanda ukusuka kwi-56% ukuya ku-91%. Ubungakanani bobugqwetha bendoda buya kwanda ngaphezu kwexesha. Iisampuli zekhamera zomlomo zanikwa amanqaku afana neentlobo zefern, eziguqulelwe ngenxa yeempembelelo ze-estrogenic kwaye zenzeke ngexesha lokunciphisa i-corpus luteum, nangona i-estrus ne-ovulation yayingavinjelwa unyango lwe-MGA.
I-166 yezilwanyana zeenkomo zasetyenziswe kwisifundo sexesha elide seMGA unyango (105 kwiintsuku ze-116). Ukunyuka okubalulekileyo (P <0.05) kufunyenwe ubunzima bobuqhophololo, ikakhulukazi ukusuka kwii-follicle ezinkulu kunale mibini yama-ovari. Ukwandiswa kwamazinga e-estrojeni kubonisa ukukhulelwa, kunye nezisindo ze-adrenal kwiimfucuza eziphathekayo zokuphathwa kwe-MGA. Emva kokunyanga nge-MGA, ubunzima be-adrenal of hefted heifers buba lula ukunciphisa. I-dose ephezulu yokwenza umsebenzi oqhubekayo ogqithisileyo kubonakala ukuba uphantse kwi-0.4 mg ye-MGA yemihla ngemihla / isithole.
Isexwayiso kuMelengestrol i-acetate powder
Gcina kude nokutya, ukusela kunye nokutya kwezilwanyana.
Musa ukungena ngaphakathi kwimida.
Le nto kunye nekhonti yayo kufuneka ilahlwe ngendlela ekhuselekileyo.
Gqoka iimpahla ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo.
Gqoka iiglavu ezifanelekileyo.
uhlambulule umgangatho kunye nazo zonke izinto ezingcolileyo ngolu hlobo, sebenzisa amanzi kunye ne-detergent.
Ukuba uginyiweyo, XHUMANA Nxibelelana noDokotela okanye i-Poisons Information Centre. (bonisa le nkunkuma okanye ilebula).
Gwema ukuvelela - fumana imiyalelo ekhethekileyo ngaphambi kokusetyenziswa.
Ukukhupha kwesi sixhobo kunye nesitya sayo kwindawo eqokelekileyo yokuqokelela inkunkuma.
Sebenzisa isiqulatho esifanelekileyo ukuphepha ukungcola kwendalo.
Gwema ukukhululwa kwimeko. Khangela imiyalelo ekhethekileyo / iifayile zedata lokukhusela.
Ukwenza umlinganiselo omkhulu (ngaphakathi kwe-1kg) ungathunyelwa kwiintsuku zokusebenza ze-3 emva kokuhlawula.
Melengestrol acetate powder Marketing
Ukubonelelwa kwikamva elizayo
Indlela yokuthenga iMelengestrol i-acetate powder esuka kwi-AASraw
Melengestrol acetate powder Recipes
I-Allylestrenol powder (432-60-0)
I-Nandrolone Undecanoate powder
I-Stenbolone powder (5197-58-0)